IPristiq vs. Effexor: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Izindaba Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Inkampani Izindaba, Wellness Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Ukuphuma Imininingwane Yezidakamizwa Ukuphila Kahle
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> IPristiq vs. Effexor: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
IPristiq vs. Effexor: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Ngaphezu kwe Abantu abadala baseMelika abayizigidi eziyi-16 unokudangala (ukucindezeleka okukhulu kwengqondo). I-Pristiq ne-Effexor yimithi emibili edumile ekhonjiswe ekwelapheni ukucindezeleka, okuvamile isimo sempilo yengqondo . I-Effexor XR (enwetshiwe-ukukhishwa) nayo iphatha okujwayelekile ukukhathazeka ukuphazamiseka, ukuphazamiseka kokukhathazeka, nokukhathazeka komphakathi. Zombili lezi zidakamizwa zivunyelwe yi-United States Food and Drug Administration (FDA). I-Wyeth Pharmaceuticals LLC, engaphansi kwePfizer, yenza yomibili le mithi ngamafomu anegama lomkhiqizo.
UPristiq no-Effexor bahlukaniswa eqenjini lemithi ebizwa nge-SNRIs (serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors). Zisebenza ngokulawula ukutholwa kabusha kwama-neurotransmitters abizwa nge-serotonin ne-norepinephrine ku-CNS (uhlelo oluphakathi lwezinzwa), ngaleyo ndlela kuthuthukiswe izimpawu zokucindezeleka.
Qaphela ukuthi igama elejwayelekile likaPristiq liyi-desvenlafaxine, negama elijwayelekile lika-Effexor lingu-venlafaxine. Le mithi ifana kakhulu. Lapho i-Effexor (venlafaxine) is umzimba, iphenduka i-metabolite esebenzayo-desvenlafaxine.
Yize uPristiq no-Effexor bobabili bengama-SNRI, banokuhluka okuthile, esizokuchaza ngezansi.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kukaPristiq no-Effexor?
I-Pristiq ne-Effexor womabili lawa ma-anti-depressants e-SNRI atholakala ngohlobo lomkhiqizo kanye nohlobo olujwayelekile. Yomibili le mithi ivunyelwe ukusetshenziswa kubantu abadala.
I-Pristiq iyatholakala njengethebhulethi ekhishwe isikhathi eside. Umthamo ungahluka, kepha umthamo ojwayelekile ungama-50 mg nsuku zonke.
I-Effexor iyatholakala ngefomu lethebulethi, futhi njenge-capsule ekhishwe isikhathi eside nefomu lethebhulethi ekhishwa enwetshiwe. Umthamo ojwayelekile ungama-75 noma ama-150 mg nsuku zonke (ukwakheka kwe-XR).
Umehluko omkhulu phakathi kukaPristiq no-Effexor
Isigaba sezidakamizwa SNRI SNRI
Ngubani igama elijwayelekile? I-Desvenlafaxine succinate (desvenlafaxine) I-Venlafaxine hydrochloride (venlafaxine)
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ithebulethi (ukukhishwa okunwetshiwe) Ithebhulethi, amaphilisi akhishwa isikhathi eside, amaphilisi akhishwa isikhathi eside
Uyini umthamo ojwayelekile? 50 mg nsuku zonke Iyahluka: umthamo ojwayelekile yi-XR 75 noma i-150 mg nsuku zonke
Yelashwa isikhathi esingakanani? Iyahlukahluka Iyahlukahluka
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala Abantu abadala
Ufuna intengo engcono kakhulu ku-Pristiq?
Bhalisela izexwayiso zentengo kaPristiq bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Izimo eziphathwe nguPristiq no-Effexor
I-Pristiq (Yini iPristiq?) Ikhonjisiwe ekwelapheni ukucindezeleka okukhulu (MDD) kubantu abadala. Kwesinye isikhathi, uPristiq uyabekwa off-ilebula kokunye ukusetshenziswa.
I-Effexor (ukukhishwa ngokushesha) kukhonjisiwe ukwelapha ukuphazamiseka kwengqondo okukhulu. I-Effexor XR (Yini i-Effexor?) Ikhonjisiwe ngesifo sokucindezeleka okukhulu, ukukhathazeka ngokweqile, ukukhathazeka komphakathi, kanye ne-panic disorder.
Isimo UPristiq I-Effexor
Ukucindezeleka okukhulu Yebo Yebo (amafomu e-IR ne-XR)
Isifo sokukhathazeka esijwayelekile Ngaphandle kwelebula Yebo (ifomu le-XR kuphela)
Isifo sokukhathazeka komphakathi (i-social phobia) Ngaphandle kwelebula Yebo (ifomu le-XR kuphela)
Ukuphazamiseka kovalo Ngaphandle kwelebula Yebo (ifomu le-XR kuphela)
Ngabe iPristiq noma i-Effexor isebenza kangcono?
TO ukuhlaziywa kwe-meta kubhekwe ukuphepha nokusebenza kukaPristiq no-Effexor. Abaphenyi baphetha ngokuthi yomibili le mithi yayifana nokusebenza ngempumelelo ekwelapheni ukudangala, kanye nemiphumela engemihle. Kodwa-ke, iziguli ezithathe uPristiq zazinesicanucanu esincane kuneziguli ezithathe i-Effexor.
Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuthola iseluleko sezokwelapha. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo kuphela onganquma ukuthi imiphi imishanguzo ekulungele, ngokuya ngesimo sakho sokwelapha kanye nomlando, kanye nanoma yimiphi imishanguzo oyiphuzayo engasebenzisana noPristiq noma i-Effexor.
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zokuqhathaniswa kwePristiq ne-Effexor
Izinhlelo ze-Insurance ne-Medicare Part D zivame ukumboza iPristiq. Inani elikhishwa ephaketheni lomuthi ojwayelekile wamaphilisi ajwayelekile angama-30, 50 mg lingama- $ 380. Ikhadi lamahhala le-SingleCare lingehlisa inani libe ngaphansi kwama- $ 60.
Izinhlelo ze-Insurance ne-Medicare Part D zivame ukumboza i-Effexor XR (uhlobo olunqunyiwe kakhulu lwe-Effexor). Inani elikhishwa ephaketheni lomuthi ojwayelekile wamaphilisi ajwayelekile angama-30, 150 mg cishe li- $ 140. Ungasebenzisa ikhadi lamahhala le-SingleCare ukwehlisa intengo ifike cishe ku- $ 15.
Njengoba izinhlelo zomshuwalense ziyahlukahluka futhi zingashintsha, thintana nohlelo lwakho lomshuwalense wezempilo ngolwazi lwamanje lokumbozwa.
Imbozwe ngokujwayelekile yi-Medicare Part D? Yebo Yebo
Umthamo ojwayelekile 30, 50 mg amaphilisi akhululiwe 30, 150 mg amaphilisi akhululiwe
I-Medicare copay ejwayelekile $ 1- $ 7 $ 0- $ 20
Izindleko ze-SingleCare $ 60- $ 80 $ 15- $ 40
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-Pristiq vs. Effexor
Imiphumela emibi kakhulu ye-Pristiq yisicanucanu, isiyezi, ukuqwasha, ukujuluka okweqile, ukuqunjelwa, ukulala, ukuncipha kwesifiso sokudla, ukukhathazeka nezinkinga zabesilisa zocansi.
Imiphumela emibi kakhulu ye-Effexor XR yisicanucanu, ubuthongo, umlomo owomile, ukujuluka, izinkinga zocansi, ukuncipha kwesifiso sokudla, nokuqunjelwa.
Eminye imiphumela emibi ingavela. Xhumana nochwepheshe wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu olugcwele lwemiphumela emibi.
UPristiq I-Effexor *
Isicanucanu Yebo 22% Yebo 30%
Umlomo owomile Yebo ishumi nanye% Yebo ishumi nanhlanu%
Ukuqunjelwa Yebo 9% Yebo 9%
Ukwehla kwesifiso sokudla Yebo 5% Yebo 10%
Isiyezi Yebo 13% Yebo 16%
Ukulala Yebo 4% Yebo ishumi nanhlanu%
Ukuqwasha Yebo 9% Yebo 18%
Ukujuluka Yebo 10% Yebo ishumi nanye%
Kwehlisiwe i-libido Yebo 4% Yebo 5%
Izinkinga zokujula Yebo 1% Yebo 10%
Ukungasebenzi / ukungasebenzi kahle kwe-erectile Yebo 3% Yebo 5%
* Amaphesenti afakwe kuhlu yi-Effexor XR, ukwakheka okuvame kakhulu okunqunyelwe kwe-Effexor
Umthombo: DailyMed ( UPristiq ), IDailyMed ( I-Effexor I-XR)
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kukaPristiq no-Effexor
Ukusebenzisa i-SNRI antidepressants ene-MAO inhibitors kungakhuphula ubungozi be isifo se-serotonin , okungasongela impilo. I-Pristiq noma i-Effexor kumele yehlukaniswe ne-MAOI ngezinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyi-14, kuya ngokuthi imuphi umuthi omiswa kuqala. I-Pristiq noma i-Effexor akufanele ithathwe ngeminye imithi enyusa amazinga e-serotonin, njengamanye ama-anti-depressants e-SNRI noma e-SSRI, ama-triptans we-migraines, nama-opioid, ngesizathu esifanayo. Futhi, i-dextromethorphan ecindezela ukukhwehlela, etholakala eRobitussin-DM kanye neminye imikhiqizo eminingi yokukhwehlela nemikhiqizo ebandayo, kufanele igwenywe, ngoba ingadala neserotonin syndrome uma ihlanganiswe nePristiq noma i-Effexor.
Eminye imishanguzo engasebenzisana noPristiq noma i-Effexor ifaka ama-NSAID (izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala ezingezona-steroidal) njenge-aspirin noma ibuprofen, nama-anticoagulants (ama-blood thinner) njenge-warfarin. Gwema utshwala lapho uthatha iPristiq noma i-Effexor.
Uma i-Pristiq ithathwa ngomuthi owenziwe i-enzyme obizwa nge-cytochrome P 2D6, omunye umuthi ungakhuphuka uze ufike emazingeni aphezulu kakhulu futhi angaba nobuthi. Ukulungiswa kwesilinganiso kungadingeka. I-Effexor ayinakho lokhu kusebenzisana.
Lolu akulona uhlu olugcwele lokusebenzisana kwezidakamizwa. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu oluphelele lokuhlangana kwezidakamizwa.
Izidakamizwa Isigaba sezidakamizwa UPristiq I-Effexor
USelegiline Tranylcypromine Ama-MAOIs (i-monoamine oxidase inhibitors) Yebo Yebo
Zolmitriptan Ama-Triptans Yebo Yebo
ISt. John's Wort Isengezo Yebo Yebo
I-Dextromethorphan (kokukhwehlela okuningi nemikhiqizo ebandayo) Ukukhwehlela okucindezelayo Yebo Yebo
I-Naproxen Ama-NSAID (izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala) Yebo Yebo
I-Phentermine Umenzeli wokwehlisa isisindo Yebo Yebo
I-Tolterodine Izidakamizwa ezenziwe nge-enzyme CYP2D6 Yebo Akunjalo
Izexwayiso zikaPristiq no-Effexor
Yonke imishanguzo yokulwa nengcindezi, kufaka phakathi uPristiq no-Effexor, inesixwayiso esibhokisi sokuzibulala. Isexwayiso esibhakeleni yisixwayiso esibi kakhulu esidingwa yi-FDA. Izingane, intsha, kanye nabantu abadala abancane (abangafika eminyakeni engama-24 ubudala) abathatha imishanguzo yokulwa nengcindezi basengozini enkulu yokuzibulala nokuziphatha. Zonke iziguli zivuliwe imishanguzo elwa nokudangala kufanele ihlolwe ngokucophelela.
Ezinye izexwayiso zifaka:
UPristiq no-Effexor abavunyelwe ukwelapha iziguli ezingane.
I-Serotonin syndrome iyisimo esiphuthumayo esibi, esisongela ukuphila esidalwa ukwakheka kwe-serotonin eningi kakhulu. Iziguli ezithatha iPristiq noma i-Effexor kufanele ziqashwe ngokucophelela ngezimpawu nezimpawu zesifo se-serotonin, njengokucabanga izinto ezingekho emthethweni, ukuhlaselwa, ukushintsha kwengcindezi yegazi, kanye nokuphazamiseka. Iziguli kufanele zifune ukwelashwa okuphuthumayo uma kukhona kulezi zimpawu. Iziguli ezithatha ezinye izidakamizwa ezandisa amazinga e-serotonin (ama-triptans, ama-tricyclic antidepressants, i-fentanyl, i-lithium, i-tramadol, i-tryptophan, i-buspirone, i-dextromethorphan, i-amphetamines, i-St.
UPristiq noma u-Effexor bangaphakamisa umfutho wegazi. Gada umfutho wegazi njalo. Uma une-high blood pressure noma izinkinga zenhliziyo, thintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngaphambi kokuthatha iPristiq noma i-Effexor.
Ama-SNRI angandisa ingozi yokuphuma kwegazi. Ingozi iyanda ngokusetshenziswa okuhambisanayo kwe-aspirin, ama-NSAID, noma i-warfarin.
Ukwenza kusebenze imania noma i-hypomania kungenzeka. Ezigulini ezinesifo sokuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo, i-antidepressant inganciphisa isiqephu esixubekile / somuntu.
Gwema ama-SNRIs noma usebenzise ngokuqapha ezigulini ezinama-engeli amancane angalashwa angalashwa (i-angle-closure glaucoma). Buza umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uma usengozini.
Uma uyeka ukuthatha iPristiq noma i-Effexor, cela umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngohlelo lokuthwebula. Ukuyekiswa okungazelelwe kungadala izimpawu zokuhoxa ezifana nesicanucanu, ukuthuthumela, ukudideka nokuquleka. Ukunciphisa umthamo kancane kancane kungasiza ukugwema lezi zimpawu.
I-Hyponatremia (amazinga aphansi e-sodium) ngenxa yesifo se-secretion engafanele ye-antidiuretic hormone (SIADH) kungenzeka. Iziguli zingase zizwe ikhanda, ubunzima bokugxila, ukukhubazeka kwememori, ukudideka, ubuthakathaka nokungazinzi, okungaholela ekuweni. Izimo ezinzima kakhulu zingenzeka. Iziguli kufanele zifune ukwelashwa okuphuthumayo uma kwenzeka izimpawu, futhi ziyeke i-SNRI.
Ungashayeli noma usebenzise imishini uze wazi ukuthi iPristiq noma i-Effexor ikuthinta kanjani.
Khuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ngokusebenzisa iPristiq noma i-Effexor uma unomlando wokuquleka.
Ezimweni ezingavamile, kube nemibiko yokuqubuka kanye ne-allergen reaction / systemic anaphylaxis reaction noma i-angioedema. Uma uhlangabezana nokuqubuka noma izimpawu zokungezwani komzimba, yeka ukuthatha iPristiq noma i-Effexor bese ufuna ukwelashwa ngokushesha. Ungathathi iPristiq noma i-Effexor uma uxabana nanoma iziphi izithako.
Amacala angajwayelekile esifo samaphaphu esiphakathi kanye ne-eosinophilic pneumonia ahlobene nale mithi. Uma uthatha iPristiq noma i-Effexor futhi uphefumula kanzima, ukhwehlela noma ungaphatheki kahle esifubeni, funa usizo lwezokwelapha ngokushesha.
I-Pristiq noma i-Effexor kufanele isetshenziswe kuphela ekukhulelweni uma inzuzo kumama inkulu kunobungozi enganeni. Ukumisa umuthi kungadala ukubuyela ekucindezelekeni noma ekukhathazekeni. Ngakho-ke, iziguli kufanele zihlolwe ngamacala ngamacala. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo angalinganisa ubungozi kanye nezinzuzo zokusebenzisa i-SNRI ngesikhathi sokukhulelwa. Ama-neonates adalulwe kuma-SNRIs ku-trimester yesithathu athuthukise izinkinga ezidinga ukulaliswa esibhedlela isikhathi eside, ukwesekwa kokuphefumula, kanye nokudla nge-tube. Uma usuvele usePristiq noma e-Effexor futhi uthola ukuthi ukhulelwe, xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngokushesha.
UPristiq: Gwinya ithebhulethi iphelele, ngamanzi. Musa ukuhlafuna, ukuchoboza, ukuncibilikisa, noma ukuhlukanisa amaphilisi.
I-Effexor XR: Gwinya iphilisi egcwele ngamanzi. Ungahlukanisi, uchoboze, uhlafune, noma ufake i-capsule emanzini. Ngenye indlela, ungavula i-capsule, ufafaze okuqukethwe ku-spoonful of applesauce, bese ugwinya ingxube ngokushesha, kulandele ukuphuza ingilazi yamanzi.
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana nePristiq vs. Effexor
UPristiq uyi-SNRI antidepressant. UPristiq uphatha ukucindezeleka kubantu abadala. Igama elijwayelekile elithi desvenlafaxine.
izindlela zokususa ukhunta uzipho
I-Effexor futhi iyi-SNRI antidepressant. I-Effexor iphatha ukucindezeleka kubantu abadala. I-Effexor XR (ukukhululwa okunwetshiwe) ilapha ukucindezeleka, ukuphazamiseka kokukhathazeka komphakathi, i-panic disorder kanye nesifo sokukhathazeka esijwayelekile. Igama elijwayelekile le-Effexor yi-venlafaxine.
Ngabe uPristiq no-Effexor bayafana?
Imithi ifana kakhulu. Lapho i-Effexor ihlanganiswa emzimbeni, iphenduka i-desvenlafaxine, isithako esisebenzayo sePristiq. Lezi zidakamizwa ezimbili ziyafana kepha zinokwehluka okuthile, okufana nomthamo, intengo, amazinga okuvela, kanye nokuhlangana kwezidakamizwa.
Ngabe uPristiq noma u-Effexor ungcono?
Yomibili le mithi iyafana ngokusebenza kwayo. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo angakukhombisa ukuthi yimuphi umuthi ongakulungela.
Ngingayisebenzisa yini iPristiq noma i-Effexor ngenkathi ngikhulelwe?
Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuthola izeluleko. Uzobheka izinzuzo ze- ukuthatha i-antidepressant vs. ingozi enganeni . Ama-neonates avezwe kuma-anti-depressants athile, kufaka phakathi ama-SNRIs noma ama-SSRI (i-serotonin reuptake inhibitors ekhethiwe njengeProzac), ku-trimester yesithathu yokukhulelwa, abe nezinkinga ezinkulu.
Uma usuvele usePristiq noma e-Effexor futhi uthola ukuthi ukhulelwe, thintana ne-OB-GYN yakho ngokushesha ukuthola izeluleko. Uma kunjalo ukuncelisa ibele , thintana ne-OB-GYN yakho futhi.
Ngingayisebenzisa yini iPristiq noma i-Effexor ngotshwala?
Cha. UPristiq noma u-Effexor akufanele athathwe notshwala ngoba inhlanganisela ingakhuphula ubungozi bokucindezeleka kokuphefumula (ukuphuza ukuphefumula, ukungatholi umoya-mpilo owenele) futhi kwenyuse ukuthambeka nokuzela, futhi kuphazamise nokuqwashisa. Inhlanganisela nayo ingakhulisa ukukhathazeka nokudangala.
Ngabe uPristiq uyasiza ngokukhathazeka?
Yize uPristiq ekhonjiswa kuphela ukwelapha ukucindezeleka, abanye odokotela bakubeka eceleni kwelebula ukukhathazeka. Noma kunjalo, ku izivivinyo zokwelashwa , 3% yeziguli ezithathe iPristiq 50 mg (umthamo onconyiwe) zithole ukukhathazeka njengomphumela oseceleni. Abanye abantu badinga ukuzama imithi ehlukile ukubona ukuthi yikuphi okusebenza kahle kakhulu. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola eminye imininingwane.
Ngabe uPristiq uyisimamisi semizwa?
Izidakamizwa ezihlukaniswa njengeziqinisi zemizwa zivame ukusetshenziselwa ukwelapha ukuphazamiseka kwe-bipolar. UPristiq ukhonjisiwe ukwelapha ukucindezeleka. Ukuthatha iPristiq kungenza imizwa yakho izwakale izinze kakhudlwana, kepha ayihlukaniswa njengesiqinisi semizwa. UPristiq uyi-SNRI antidepressant.
Ingabe i-venlafaxine iyi-SNRI?
Yebo. I-Effexor (venlafaxine) iyi-SNRI. Amanye ama-SNRI wokudangala afaka phakathi iPristiq (desvenlafaxine), Fetzima (levomilnacipran), kanye ICymbalta (i-duloxetine).
Konke odinga ukukwazi ngeNexplanon, ukufakelwa kokulawulwa kokuzalwa
I-Atorvastatin vs. simvastatin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
indlela yokwelapha imvubelo ukutheleleka owesilisa
ukudla okuhle ongakudla namakhaza
ungathatha umuthi wokukhathazeka ngenkathi uncelisa
wenza isisindo ku-mirena iud
ningathatha i-motrin ne-tylenol ndawonye
ningathatha i-naproxen ne-ibuprofen ndawonye